Nagarik Shukrabar - कन्फ्युज्ड पुस्ता
बुधबार, २० असार २०७५, ०६ : ४४ | प्रजु पन्त
ए प्लस वा ए आए साइन्स । डाक्टर त पक्का !
बि आएछ भने म्यानेजमेन्ट । बैंकको सिइओ या चार्टर एकाउन्टेन्ट । परिआए इन्जिनियर पनि बनौँला ।
त्यो भन्दा तल आए ठीकै छ, त्यही मानविकी पढ्नु पर्ला । राजनीति, पत्रकारिता, समाजशास्त्र छँदैछ ।
एसएलसीबाट नाम परिर्वतन भएर एसईई त बन्यो । बोर्ड फस्ट, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणीको पद्धति परिर्वतन भयो तर विडम्बना हाम्रो मानसिकता उस्तै छ अझै ।
११ र १२ कक्षालाई सरकारले विद्यालय स्तरमै प्रवेश गराए पनि यो शैक्षिक तह भनेको भावि गन्तव्य निश्चित गर्ने प्रवेश विन्दु हो । भविष्यमा के बन्ने र कसरी बन्ने भन्ने यात्रा तय यही विन्दुबाट हुन्छ ।
सूचना प्रविधिको विकासले विश्व पकेटमा अटाइसक्यो तर के गर्नु ? मानसिकता भने उही छ । मेरो क्षमता के हो ? मलाई मनपर्ने विषय के हो ? मैले कुन विषयमा राम्रो गर्नसक्छु भनेर मूल्यांकनका आधारमा हैन, कति प्रतिशत आयो भने केमा भर्ना हुन सकिन्छ ? मेरो साथीहरु कुन विषय पढ्छन् ? अनि मेरा अभिभावक के चाहन्छन् ? त्यसैका आधारमा जोखिमपूर्ण गन्तव्य सुरु हुन्छ, हाम्रा किशोर–किशोरीको ।
समय र परिस्थिति बद्लिइसक्यो । कतै मानसिकता पनि बदलियो कि ?
एसईईको नतिजापछि कक्षा ११ को भर्नाका लागि विद्यालयमा लागेका लाइनहरुमा बसेकाहरुको मनस्थिति बुझ्दा सामाजिक सञ्जालमा फेरिएको चेतना समाजमा फेरिएको छैन । अहिलेको किशोर पुस्ता हिजोको भन्दा केही स्मार्ट त छ तर अझै कन्फ्युज छ ।
यो निष्कर्ष त्यत्तिकै निकालिएको हैन । एसईईको नतिजापछि नयाँ स्कुल भर्नाका लागि तँछाडमछाड गरेकाहरुबीच पुगेर अन्तक्र्रिया गर्दा निस्किएको निष्कर्ष हो ।
शुक्रवारकर्मी मंगलबार काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न कलेज पुग्ने क्रममा माइतीघरस्थित अधिकांशको सपनाको कलेज मानिने सेन्ट जेभियरमा पुग्दा एउटा कुनामा एक्लै फर्म भरिरहेको अवस्थामा भेटिए, ओखलढुङ्गाका गणेश कार्की ।
कक्षा १० सम्म ओखलढुंगामै पढेर उनी काठमाडौं भित्रिएका रहेछन् ।
कुन विषय छान्नुभयो त ?
‘हेर्नु न दिदी ए प्लस आउँछ भन्ने थियो, ए मात्र आयो । मलाई पहिलेदेखि रिसर्च गर्न मन थियो । साइन्स पढूँ कि भन्ने लागेको छ ।’
त्यहीँ भेटिए आदिश्री आचार्य र कुसुम खड्का । दुवै जना फर्म भरिरहेका थिए ।
केको फर्म भरिरहनुभएको ?
मुसुक्क हाँसे दुवै किशोरी ।
‘कलेज पढ्नलाई फर्म भरेको,’ उमेर अनुसारको चलाखी देखाए उनीहरुले ।
‘त्यो त थाहा छ नि ! कुन विषय पढ्न खोजिरहनु भएको छ पो भनेको त । तपाईंहरुले कुन विषय लिने निर्णय गर्नुभयो ?’
उनीहरुले एकै स्वरमा भने, ‘साइन्स ।’
अपेक्षित थियो उत्तर ।
‘किन साइन्स छान्नुभएको ?’
आदिश्री अगाडि सरेर बोलिन्, ‘मलाई त साइन्सबाहेक अरु विषय पढ्ने विषय हो जस्तै लाग्दैन । विज्ञान पढेपछि सकिएन भने पनि अरु विषय पढ्न बाटो खुल्छ ।’
उत्तरबाट प्रस्ट भयो साइन्स पढेर निश्चित विषयमा दख्खल राख्नसक्छु भन्ने आत्मविश्वास थिएन । बरु कुसुम खड्का अलि क्लियर देखिइन् ।
‘म त एमविविएस पढ्न साइन्स लिन लागेको हो ।’
उनीहरु दुवै जना उच्च शिक्षाका लागि दाङ तुल्सीपुरबाट काठमाडौँ आएका रहेछन् ।
दुवै बानेश्वर बस्ने । आदिश्रीले हजुरबुबा र खड्काले दाजुहरुसँग बसेर अध्ययन गर्ने बताइन् ।
साइकोलोजिस्ट सृष्टि श्रेष्ठको परिभाषामा किशोरावस्था भनेको हुरीजस्तै हो । एकदमै छिटो बत्तिएर आउने अनि धेरै नटिक्ने मनोभावना हुन्छ उनीहरुमा । यस उमेरमा गरिने निर्णय पनि उस्तै हुन्छ । हेर्दा जे पनि सहज लाग्छ तर जटिल हुन्छन् आउने बाटाहरु ।
हेर्दा अहिलेका किशोर–किशोरी आफ्नाबारे आफैं निर्णय गर्न सक्षमझैँ देखिन्छन् तर वास्तवमा उनीहरु सक्षम छैनन् । समय बद्लियो तर समाज बदलिएको छैन । परिवारको मानसिकता उस्तै छ ।
अझै यहाँ क्षमता र रुचिको आधारमा भावि बाटो तय हुन्न । अभिभावकको सपना लादिन्छ यहाँ अझै । आफ्नोबारे आफैँ निर्णय गर्न हाम्रा किशोर–किशोरी अझै स्वतन्त्र छैनन् । सामाजिक प्रतिष्ठासमेत जोडिन्छ कहीँकतै ।
‘किशोरावस्था भनेको संक्रमणकाल हो,’ मनोविद् गंगा पाठकले भनिन्, ‘यो बेलामा शारीरिक, मानसिक तथा भावनात्मक संवेगात्मक परिवर्तन देखा पर्छन् । यस उमेरमा शरीर त परिवर्तन भई नै हाल्छ, मानसिक रूपमा पनि ठूलो केही परिवर्तन हुने भएकाले अभिभावक सचेत हुन आवश्यक छ ।’
परिवारका सदस्यले आफूलाई कसरी हेरिरहेका छन्, समाजले कसरी हेरिरहेको छ भन्ने पाटोमा किशोर–किशोरी सचेत हुन्छन् । आफूलाई परिवार र समाजले हेर्ने दृष्टिकोणको आधारमा उनीहरुले आफ्नो दृष्टिकोण बनाइरहेका हुन्छन् ।
‘परिवारले जस्तो इन्पुट दियो उस्तै आउटपुट निस्कन्छ,’ मनोविद् श्रेष्ठले भनिन्, ‘हाम्रोमा आफूले भनेको जस्तै होस् भन्ने चाहना बढी देखिन्छ । यो राम्रो हैन ।’
श्रेष्ठ सबैको धारणा बुझ्ने, असल र खराब पाटो छनोट गर्ने र सामूहिकताका आधारमा निर्णय गर्ने ‘डेमोक्रेटिङ प्यारेन्टिङ’ को अभ्यास गर्न अभिभावकलाई सुझाव दिन्छिन् ।
पोखरा विश्वविद्यालयका प्राध्यापक एलपी भानु शर्मा अहिलेको किशोर–किशोरीको मुख्य चुनौती नै अरुको प्रभावबाट बच्नु रहेको बताउँछन् । पहिले आफ्नो स्वभावको पहिचान गरेर निर्णय गर्नु नै बुद्धिमतापूर्ण हुने उनको मत छ ।
‘अरूको प्रभावमा परेर क्षमताभन्दा बाहिर जाँदा आउने नतिजा दुःख नै हो,’ उनले भने, ‘बजारमा कुन विषय चल्छ त्यतातर्फ नहेरौँ । आफू कुन विषयमा राम्रो गर्न सक्छौँ त्यो हेरौँ । स्वभावलाई हेरौँ, आफूतिर फर्किऔँ ।’
तर सबै उस्तै कहाँ हुन्छन् र ! यस्तै एक अभिभावक पनि भेटिए मालीगाउँका बुद्धिराम बिष्ट । उनी थापाथलीस्थित एभरेस्ट कलेजको प्राङ्गणमा फर्म भरिरहेका थिए, छोरीका लागि । नजिकै उभिएकी थिइन् उनकी छोरी ।
उनको हातमा साइन्सको फर्म थियो ।
‘साइन्स पढाउने तपाईंको इच्छा कि छोरीको ?’
‘छोरीले एसईईमा ए प्लस ल्याई अनि साइन्स पढ्छे रे ! त्यही भएर भर्ना गर्न आटँेको,’ बिष्टले भने ।
नजिकै बसेर बाबुले फर्म भरेको हेरिरहेकी छोरी सफला बिष्टले आफ्नै इच्छाले साइन्स रोजेको बताइन् ।
‘ड्याडीले त आफूलाई जे मन पर्छ, त्यही पढ भन्नुभएको थियो,’ सफलाले भनिन्, ‘मलाई त वैज्ञानिक बन्ने धोको छ । त्यही भएर साइन्स रोजेको ।’
त्यसपछि शुक्रवारकर्मी बानेश्वरको नेपाल मेगा कलेज पुग्यो । गेटमा नै करिब आधा दर्जन विद्यार्थीसँग जम्काभेट भयो । समूहमा दुई किशोरी र चार किशोर थिए । सबै महेन्द्रनगरबाट आएका थिए, राजधानीमा उच्च शिक्षाका लागि । धेरै कलेज चहारिसकेका उनीहरुले कहाँ, के पढ्ने निश्चित भने गरिसकेका थिएनन् ।
प्राध्यापक शर्मा धेरैजसो अभिभावकले छोराछोरीलाई के पढाउने भनेर सोध्ने चलन रहेको बताउँछन् । उनको दृष्टिमा यो सन्तानको जीवनको अपमान हो ।
‘गुणात्मक क्षमता भएको मान्छेले यस्तो प्रश्न गर्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘छोराछोरीलाई यो विषय पढ्, यो काम गर्, योसँग विवाह गर् भनेर सिधै निर्णय गर्ने चलन छ । उनीहरुलाई सोध्ने, उनीहरुलाई स्वतन्त्र भएर उनीहरुको जीवन बाँच्न दिने चलन छैन । यस विषयलाई संवेदनशील आँखाले हेरौँ । सजिलो हैन, सहज खोजाैं।’
मनोविद् श्रेष्ठ अभिभावकले आफ्नो एकोहोरो इच्छा लाद्दा किशोर–किशोरीमा मानसिक समस्या आउन सक्ने सचेत गराउँछिन् । यसरी लाद्दा त्यसको नतिजा भयावहसमेत हुनसक्छ ।
एउटा रिपोर्ट हेरौँ न !
अभिभावकका लागि पढिदिएका बच्चाहरु छिट्टै कुलतमा फँस्ने सम्भावना बढी हुने विभिन्न अनुसन्धानले देखाएका छन् । यसबाट उनीहरुको भविष्य त बर्बाद हुन्छ नै, देशले समेत सक्षम नागरिक गुमाउँछ ।
लागूऔषध प्रयोगकर्ताको विषयमा विद्यावारिधि गरेका आशीष सिन्हाका अनुसार, १४ देखि २६ वर्ष उमेर समूहका युवा सबैभन्दा बढी दुव्र्यसनको सिकार बनेका छन् ।
यो र यस्ता समस्या आउनुमा आफ्ना सन्तानको निरन्तर निगरानीको अभाव त हो नै, इच्छा विपरीत दिइने दबाबको पनि कम भूमिका हुँदैन । विज्ञहरुको मतअनुसार किशोर–किशोरीलाई दबाब हैन, समन्वय गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ । कन्फ्युज्ड पुस्तालाई आफ्नो चाहना थोपरेर थप कन्फ्युज्ड बनाउने हैन, विकल्प सहितको परामर्श दिनु उत्तम उपाय हुने विज्ञहरुको धारणा छ ।
तस्बिर : ११ कक्षाा भर्नाका लागि कलेज छान्न हिडेका विद्यार्थी ।